Uqikelelo lwemozulu Ehlabathini Lonke | Gcina A Isitimela
Uqikelelo lwemozulu Ehlabathini Lonke
ekhaya > Uqikelelo lwemozulu Ehlabathini Lonke
Uqikelelo lwemozulu kwihlabathi liphela – Isixhobo semozulu – Iindawo zemozulu – Imephu yemozulu – Ulwazi lwemozulu
Imozulu yemozulu yeCelsius neFahrenheit
Uqikelelo lwemozulu yethu yeHlabathi ikwiCelsius naseFahrenheit, Nceda ube nomonde ngelixa isixhobo sezulu esingezantsi sithwala imithwalo kwaye usebenzise i icon yokukhulisa ? kwikona ephezulu ukukhangela iindawo ezahlukeneyo zemozulu kwaye ungatshintsha phakathi kweCelsius neFahrenheit.
Ngomhla we-19 kuMeyi 2022, uLwesine
Ndifuna ukufumana imozulu ye ngo °C°F .
Ungarhuqa ngesikhombisi semouse yakho kwimephu yemozulu engezantsi kwaye uye nakweyiphi na indawo kwihlabathi, uza kubona ulwalathiso lomoya kunye nezinye iinkcukacha ezinje ngeedigri zemozulu zangoku.
Ukwengeza, ungasebenzisa ibha yesilayidi emazantsi efestile ukuya tshintsha ixesha kwaye wandise kwaye usondeze ngemouse yakho yecomputer.
Xa ubona isixeko esinomdla kuwe, ungacofa kwigama, kwaye uya kufumana ulwazi lwemozulu eneenkcukacha kwiimeko zeso sixeko.
bonus: Phezulu 10 Iziganeko zemozulu ezingaqhelekanga
Sifumene ividiyo entle ukukubonisa imo yezulu encomekayo engeyonxalenye yesimo sezulu esiqhelekileyo.
Sinqwenela ukucebisa ngombuzo oqhelekileyo, Ngaba uqikelelo lwemozulu luchanekile?
Kukho intetho ebomini, ukuba kuphela 2 Izinto ebomini eziqinisekisiweyo kukuba uya kuhlawula irhafu kwaye uya kufa ekugqibeleni, konke okunye akuqinisekanga.
kunjalo, ukuqikelela uqikelelo lwemozulu kwihlabathi liphela, izazi ngemozulu, Sebenzisa iimodeli zezibalo, ezichanekileyo zichanekile, kodwa bangabantu kwaye banokuba baphosakele kwiimeko ezigwenxa, okanye imeko yotshintsho ngequbuliso kwimozulu.
Siyathemba ukuba usithandile isixhobo sethu semozulu kwaye ukuba wenzile, singavuya ukuba usebenzisa indawo yethu ukufumana eyona kunye namaxabiso aphantsi Ukuqeqesha amaxabiso Amatikiti, nje uye Gcina A Isitimela.
Ingaba ufuna kuzakulungisa eli phepha kwi sayithi yakho, nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fweather-forecast%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)